ကျွန်ုပ်တို့၏ Domain ကိုဘာကြောင့်လွှဲပြောင်းပြီးဘာကြောင့် Martech.zone သို့ပြောင်းလဲပေးရသနည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 29, 2017 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 7, 2020 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာငါရေးခဲ့တုန်းက Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Bloggingငါဟူသောဝေါဟာရကိုကြိုက်တယ် ဘလော့ဂ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ်။ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၊ သတင်းများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုထုတ်ဖော်ရန်သတင်းကိုလွှင့်ရန်လုံးဝမမှီတော့ပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ကနေထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုသံယောင်လိုက်တဲ့လူမှုမီဒီယာကနေတစ်ဆင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်ပရိသတ်၊
ကုမ္ပဏီများသည်ဤအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများထက် ကျော်လွန်၍ မျှဝေနိုင်သည်။ပိုင်မီဒီယာ), သို့သော်။ ၎င်းတို့သည်အခြားစာပေများတွင်သူတို့၏အသံကိုကြားရန်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းများရှိသည် (ရရှိတဲ့မီဒီယာ) ။ နှစ် ဦး စလုံး, သင်တန်း၏, မျှဝေခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (လူမှုမီဒီယာ) သို့မဟုတ်လစာနှင့်ရာထူးတိုးပေးဆောင်မီဒီယာ) ။ ဝေါဟာရ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ် ကန့်သတ်ခဲ့သည်, ထိုအသုံးအနှုန်း အကြောင်းအရာစျေးကွက် ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းကုမ္ပဏီများသည်ပိုင်ဆိုင်သောမီဒီယာ၊ ရရှိသောမီဒီယာ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပေးဆောင်ရသောမီဒီယာရင်းမြစ်များမှတဆင့်ဖြန့်ကျက်ထားသည့်မဟာဗျူဟာများကိုဖော်ပြရာ၌ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာစာအုပ်တစ်အုပ်တည်းကိုအတူတူပင်ရေးသားခဲ့သော်လည်း၎င်းကို Dummies အတွက် Content Marketing ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အသုံးအနှုန်း ဘလော့ဂ် ၎င်း၏သက်တမ်းကန့်သတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏နာမည်ကိုခေါ်ခဲ့သည် Martech Zone marketingtechblog.com URL ကိုအတူ။ ငါသည်ငါ့စာအုပ်နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ငါ၏ site ကိုအတူတူပါပဲလုပ်နေတာခဲ့သည်။ ဝေါဟာရ ဘလော့ဂ် အလားတူတုံ့ပြန်မှု evoked ။ ဝေါဟာရ ဘလော့ဂ် အသက်အရွယ်, ကိုယ်ပိုင်, နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်တံပိုးမှုတ်သောအခါ။ ငါ site ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရည်ညွှန်းသည် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။ အခြားသူများကမူသူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုရည်ညွှန်းသည် ဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းများ။ သို့သော်၊ ဒိုမိန်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ခဲ့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးကြောင့်ဒိုမိန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိဂူဂဲလ်သည် redirects များကိုအပြစ်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး၊ ရှာဖွေရေး console ကိုအတွက်ဒိုမိန်းပြောင်းလဲမှုယန္တရား.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမိန်းကိုမျှဝေရန်လည်းခက်ခဲသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ - ဘလော့ဂ် - dot-com ပြောပြီးလူတွေကိုဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါစာလုံးပေါင်းပြခဲ့ရတယ်။ ၎င်းသည်လျှာကိုလှိမ့်ပစ်လိုက်ရုံသာမက၎င်းမှတ်မိနိုင်သည့် URL သို့ဘာသာပြန်ရန်လွယ်ကူသောဒိုမိန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Martech အရောင်းနှင့်စျေးကွက်နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းမှလက်ခံသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
မှတ်မိရန်လွယ်ကူသောနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော Martech နှင့်သက်ဆိုင်သောဒိုမိန်းများကိုငါထပ်ခါထပ်ခါရှာဖွေခဲ့သည် Martech.zone (ငါတို့တွင်လည်း marketing.technology ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အတော်လေးကြာသည်)
မိတ်ဆက်ပေးခြင်း Martech Zone
ကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်ဒိုမိန်းအသစ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူတို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်ကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ငါတို့အတူတူလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါသောကြာနေ့ကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာငါဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သောအရာများ မှလွဲ၍ လွယ်ကူသောရွှေ့ပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည် domain name ကို ပရိုဖိုင်းများနှင့်တတိယပါတီဆိုဒ်များတွင်! ငါအဲဒါကိုသောင်းချီသော site လက်မှတ်ပေါင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတကယ့်မျက်လုံးဖွင့်ပွဲပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏အဟောင်းလင့်များနှင့်ဒိုမိန်းတစ်ခုနောက်ကွယ်မှရှိကြ၏ SSL ကိုလက်မှတ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် alias ကိုဖွင့ ်၍ လူများအား redirect လုပ်ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမိန်းအဟောင်းနှင့်ဒုတိယဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထားရှိပြီး၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးဒိုမိန်းအသစ်သို့အမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းပြောင်းရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များမှတဆင့်ရည်ညွှန်းထားသော URL အချို့ရှိသောကြောင့်ပုံများနှင့်လည်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ငါသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ။
ငါတို့အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် လူမှုရေး link ကိုဝေစုအရေအတွက်။ ငါဒီကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ အစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကိုကြေငြာတာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့တိုတောင်းသောပလက်ဖောင်းများနှင့်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများသည်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုမှမလိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ အောက်ပါ URL များသည်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်သပ်သပ်ဖြည့်တင်းရန်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသည်။
ဒီတော့အဲဒီမှာသင်၌ရှိသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လူမှုရေးဆိုဒ်များအားလုံးအားယခုချိန်ညှိနေပြီဖြစ်သည် Martech ထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Martech Zone Podcast ကိုအင်တာဗျူး, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Martech လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများ (ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကြည့်ပါ) နောက်လိုက်များမဆုံးရှုံးဘဲတွစ်တာကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်)!
ခှဲခှါခွငျး Martech Zone မင်္ဂလာပါ Martech Zone!
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒိုမိန်းDummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ဒိုမိန်းပြောင်းလဲမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Tech Blogစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်နေပြည်တော်martechmartech ဘလော့ဂ်martech zoneအမြဲတမ်း redirectseo
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2017 ခုနှစ် ညနေ 8 နာရီ 08 မိနစ်